Maoritania avy amin’ny fijerin’ny artista portiogey iray · Global Voices teny Malagasy
Maoritania avy amin'ny fijerin'ny artista portiogey iray
Voadika ny 12 Jolay 2018 5:12 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, Português, Español, русский, Italiano, عربي, Swahili, 繁體中文, 简体中文, English
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny mey 2013)
Miaina ao Nouakchott, Maoritania, izay hanaovany hosodoko sy hamelomany toeram-pampirantiana zavakanto iray ny artista Portiogey Isabel Fiadeiro (@Isabelfiadeiro). Manao kisoritsoritra tantara an-tsary avy amin'ny zavatra hitany ihany koa i Fiadeiro, mameno ny bilaoginy Sketching in Mauritania amin'ny sarin'ny fiainana andavanandro ao amin'ity firenena Afrikana Andrefana ity.
Nifampiresaka tamin'i Fiadeiro momba ny zavakantony sy ny fomba nanampian'ny fanaovany tantara fohy hahafantarany hahafantatra an'i Maoritania ny Global Voices.
Global Voices (GV): Avy aiza moa ianao? Hafiriana izay no niainanao teto Maoritania ary inona no nahatonga anao ho eto aloha voalohany?
Isabel Fiadeiro (IF): Portiogey ny raiko ary Espaniola ny reniko. Lehibe tany Portiogaly aho ary mahatsapa tena ho Portiogey. Niaina efa ho 15 taona tany Angletera ihany koa aho (nivezivezy tany). Ny marina dia nandao an'i London aho tamin'ny marsa 2003 ka niverina nonina tany Portiogaly. Nahavita ny lisansa tamin'ny zavakanto aho tao amin'ny Sekolin'ny Zavakanto tao Wimbledon tamin'ny taona 2000 ary nitsahatra tsy hanosodoko 3 taona nanaraka izany, izany hoe nanapa-kevitra aho fa fotoana izany handehanana.
Tamin'ny novambra 2003, nanapa-kevitra ny handeha ho any Guinée-Bissau amin'ny alalan'ny Renault 4L izaho sy ny namako Portiogey iray. Simba ny fiara tao amin'ny Valanjavaboarim-pirenena Banc d'Arguin amin'ny moron-dranomasin'i Maoritania. Nijanona tao Nouakchott ny namako ary nandeha niaraka tamin'ny vondrona Frantsay hijery ny faritra Adrar aho.
Nanaraka ny lalana any an-tanihay izahay, nijanona tsindraindray tamin'ireo tanàna kely maro ividianana mofo na manamboatra kodiarana. Nitondra kahie fanaovana kisoritra aho ary sambany nanomboka nanoritsoritra sary tamin'izay hita. Ny fahalianana te-hahafantatra bebe kokoa ny olona miaina any anivon'ity toerana foana ity no nahatonga ahy hiverina tany amin'ny janoary 2004. Ary tamin'ny septambra 2004 nifindra ho aty Nouakchott aho ary mbola eto hatramin'izao.
Diallo sy Mamadou, mpanjaitra ao Nouakchott. Kisoritsoritr'i Isabel Fiadeiro.
GV: Ahoana no nanampian'ny kisoritsoritra anao hahafantatra ny toerana iray?
IF: Ny fanaovana sary sy ny jery ilaina amin'izany no mahatonga anao hahita izao tontolo izao amin'ny fomba hafa. Mandeha miadana kokoa ianao, mijery ary dia mahita zavatra maro. Ho ahy dia karazana fampiasaina tsiaro sy fanontaniana ihany koa ny manao sary.
Mijery izay ataonao ny olona manodidina, noho izany, mety foana na ny avy amiko na ny avy amin'ny olona. Raketinao izay nisarika ny fifantohanao ary avy amin'izay fihetsika izay, lasa misy ny fifandraisana, na dia tsy mitovy aza ny teny iresahanareo.
Polisy ao amin'ny fihetsiketsehana, Nouakchott. Kisoritsoritr'i Isabel Fiadeiro.
Nandritra ny taona maro aho nandeha tany amin'ny tanàna kely mitoka-monina iray mandritra ny iray volana, monina ao amin'ny fianakaviana iray ao an-toerana aho, nanao sary ny fiainan-dry zareo andavanandro. Nanao izany aho tamin'ny tanànan'ny mpanjono anankiroa tany Banc d'Arguin, sy tany Oualata, Goungel ary Ouadane ihany koa. Tany Tindouf, tany amin'ny tobin'ny mpialokaloka ao Sahara occidental izay nandehanako hanao sarin'ny vehivavy sy ny asany any an-tsaha no nandehanako naharitra tamin'ny tanàna iray. Lasa namana ireny olona rehetra ireny, nifanoratra imailaka sy nifampiantso telefonina hatrany izahay ary misy ny fotoana tonga eto Nouakchott ry zareo.
Isaky ny zorontany ihany koa aho maheno voambolana vaovao, mifandraika amin'ny ranomasina na tany na biby, na amin'ny revolisiona.
Mpihira ao amin'ny Fondation Malouma. Kisoritsoritra nataon'i Isabel Fiadeiro.
GV: Mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera Urban Sketchers ihany koa ianao. Azonao lazaina ve ny momba azy ireo?
IF: Fikambanana iraisampirenena tsy mitady tombombarotra ny Urban Sketchers, manoka-tena ho amin'ny fandrisihana hanao kisoritra sy sary hosodoko eo noho eo. Iray amin'ireo ifandraisana miisa 100 nasaina handray anjara avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao aho. Ny tanjonay dia ny handrisika olona hafa hanao kisoritra isan'andro, mba hanatsarany ny talentany sy ny fahaizany mijery.
Tamin'ny taona 2008 no nahitako azy ireo voalohany ary tena nahafinaritra ahy izany, satria talohan'izany aho nanirery; ny fihaonana tamin'ity fikambanana ity no nahatonga ahy te-“hanoritra” bebe kokoa, sy tsara kokoa. Manao kisoritra amin'ny fomban'ny fanadihadiana ny mpanorina ny Urban Sketchers, Gabi Campanario; nivoaka tao amin'ny Seattle Times ny sangan'asany. Nampisy fiovana goavana ho ahy izay fomba nampiasainy ny kisoritra izay.
Mifanakalo hevitra momba ny The Great Gatsby ao amin'ny kliobam-pamakiana boky. Kisoritsoritr'i Isabel Fiadeiro.
Nandray anjara tamin'ny symposiums maromaro an'ny Urban Sketchers aho. Hotontosaina any Barcelone ny manaraka. Manana solontena ifandraisana hafa izahay eto Maoritania amin'izao fotoana izao dia i Oumar Ball izay nanomboka nanao sary tamin'izay hitany taona vitsivitsy lasa izay ary namoaka ny asany tao amin'ny Flickr. Amin'ity taona ity aho te-hanao valandresaka sy atrikasa maro aho handrisihana ny olona hafa ao Maoritania hanao sary izay hitany. Nanomboka namoaka ny sary nataoko ny Citymag, gazetiboky maimaimpoana zaraina isam-bolana ao Nouakchott. Angamba hanosika ny olona handray pensilihazo na penina izany ka hanombohany hanao sary.